Abwaan Cabdullaahi-Soomaali Oo Jawaab Kulul Ka Bixiyey Damaca Itoobiya - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Abwaan Cabdullaahi-Soomaali Oo Jawaab Kulul Ka Bixiyey Damaca Itoobiya
Abwaan Cabdullaahi-Soomaali Oo Jawaab Kulul Ka Bixiyey Damaca Itoobiya
Ra’iisalwasaaraha dowladda boogta iyo malaxda bariga afrika (ITOOBIYA) wuxuu sheegay in soomaaliya iyaga ka mid noqoneyso oo ay kooxda kooxda Farmaajo (Fasaad-koriye) saas kula heshiiyeen.
Hadaba anigoo ka mid ah muslmimiinta bariga afrika waxaan leeyahay soomaaliya itoobiya kama mid noqoneyso ee itoobiya ayaaa soomaaliya ka mid noqoneysa.
Waxaanu soo dhaweyneynaa warkaaga ah isku biiridda laakiin insha allaah sida adigu aad rabto waxba noqon maayaan ee cagsigeeda ama lidkeeda bay noqoneysaa oo maamulka gacan-ku-rimiska ah ee qoriga caaradiisa ku dhisan baa tusbax go’ay noqonaya waxaana la xoreynayaa muslmiinta dulman ee cabburinta iyo cadaadiska soohdin-dhaafka ah ku jira insha allaah.
Kirishtaanka laga badan yahay ee dowladda boogta iyo malaxda bariga afrika wuxuu noqon doonaa mid diinta islaamka qaata, mid cagaha wax ka daya oo qaaradda ka haajira iyo mid jizyo laga qaado oo dulleysan insha allaah.
Anaga (muslmiinta) weli kama aanaan bogsan nabarradii nagu gaaray xasuuqii ka dhacay Harar ee muslmiinta dhiiggoodu sidii webiga u qulqulay sidoo kalena ma aanaan hilmaamin xasuuqyadii ka horeeyay iyo kuwii ka dambeeyay ee ilaa weli socda.
Ma aanaan iloobin gabdhaha muslimiinta ee maalin walib gaalka dhoorka lihi iyagoo garba duub u xiran kufsanayo, kadibna garacyadaad ka dhasheen in ay koriyaan lagu qasbayo.
Ma aanaan hilmaamin xad-gudubka aad diinta islaamka kula kacdeen iyo bahdilaadda iyo cabiidsiga ay ku nool yihiin muslmiinta nala dhashay ee idiin katiineysan haday Soomaali yihiin iyo haddii kaleba.
Kooxaha qowleysatada ah ee maalin waliba idiin saxiixaya in Soomaaliya dowladda boogta iyo malaxda bariga afrika ka mid tahay kama turjumayaan muslmiinta ee waa caadul-qaatayaal liita adinkuna waad ogtihiin in aysan anaga wakiil naga ahayn ayna yihiin daba-dhilifyo sandareerto-raac ah, sababtoo ah idinka iyo shisheeyaha idinla midka ah ayaa markii horeba aas aasay.
Waxaan ku faraxsanahay in ay bariga afrika ku sugan yihiin rag bilow u ah sidii laydiin dabar-jari lahaa muslmiintuna u noqon lahaayeen kuwo sharaf leh, raggaasoo dagaallo badan oo ay la galeen idinka iyo cadawga idinla midka ah-ba kasoo hooyay guullo la taab karo kuwa kalena in ay horseed ka noqdaan diyaar u ah.
Xaqqu wuu hilaacaa hadduu kini habsaamaaye,
Kol umbey halkaan raba martaa howsha dunidaane,
Waxaan ciil hagoogtoon facay la hadli waayaaba,
Hurgumiyo waxay igu kacaan laxaw i haayaaba,
Hiirtaanyadi waxaan soo gucdiyo haarihiyo boogti,
Sida tima hool hoolayoo sahal u hoobaaya,
Heybadiyo sharaftey waxay hoos u qubataaba,
Hinjigii inaan rogay culeys igu hillaa waayo,
In ay hanada ii soo kaceen himilo khayreysan,
Hantaqii la ii qoday in aan haatan badi duugay,
Asaan soo hambaabiriray halqigu haatan garay taase.
Waxaan kusoo gaba gabeynayaa tuduacyadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee ahaa:
Godobtaydu waa wada jirtaa goonyahoo idile,
Gashi nimaan ku leeyahayba waa daba-gelaayaaye,
Waxaan goosan karo anigu waan gurubsanaayaaye.
Qalinkii: Abwaan Cabdullaahi-Soomaali.